5 Kuhle-European Osonhlamvukazi ngihambe ngesitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Kuhle-European Osonhlamvukazi ngihambe ngesitimela
(Kugcine ukubuyekezwa On: 07/08/2021)
Isikhathi ekugcineni sesifikile – ukuthi usanda kuphothula inyuvesi, uphokophele out vacation yakho yonyaka, noma uthathe isinqumo sokuthi nokuyenga kwezwe travel ayikwazi aphuthelwe, okhethe ukuhamba Europe ngesitimela. Kuwumqondo romantic, uhambo bahamba izinkulungwane kulo lonke iminyaka. Kungaba esibekele ngokuphelele. ngoba ujantshi ukuxhumana kwayo kakhulu eYurophu waziwa. Kusukela amathikithi wendawo ezishibhile ezwekazini-esithathe EU wesitimela pass, kulula hop i overnighter bese befinyelela uya khona ngakusasa, isilungele adventure yakho entsha.
Kodwa lapho kufanele uya? Kungakhathaliseki sekuyisikhathi sakho sokuqala noma okweshumi yakho, ayemane nje ethuswa izitimela etholakalayo kungaholela ekucindezelekeni, ukudideka, nokwesaba okuphelele kokuphuthelwa. Worry hhayi – ngoba siqoqe lapha uhlu lwamabhakede we 5 engcono capitals aseYurophu zokuhambela ngesitimela. Hlala phansi, Fasa ibhande, futhi londoloza indawo baguettes France wonke, ngoba sesikude ku ride.
1. Kuhle-European Osonhlamvukazi ngihambe ngesitimela: Paris, France
njengoba ayethembisile, siyakucela ukuqala lolu hambo esisobala, nge stop komunye wemizi ezidumile adumileyo romantic kunazo zonke emhlabeni. Paris has ezinye the best wesitimela uxhumano emhlabeni, nge izitimela egijima kulo enkabeni yedolobha, ngakho kulula kude isiteshi. Paris ligcwele izinto okumele uzenze, ngakho-ke ungafuna ukuze uhlale lapha kuphele izinsuku ezintathu okungenani uthole amazwibela ngokuphila idolobha.
Misa i- Louvre for a peek at the Mona Lisa or exercise those glutes by climbing the Arc De Triomphe. Jabulela cruise idina Rhine, ukuyovakashela ezinye boutiques French, futhi uthathe i-Eiffel tower ekhazimulayo njengoba iphile kusihlwa.
Kunjalo, Paris ingaphezu idolobha lakhona isikhungo. Leli dolobha elikhulu inabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili, okuyinto izindlela ungachitha amasonto lapha ngaphandle ukunwaya ngempela ebusweni lokho sipho. Yokubaleka for uhambo namuhla kusukela izindimbane ngesikhathi Pont Alexandre III kanye nekhanda ukuze Versailles, lapho iRoyal Palace namanje busa supreme naphezu sikhala yayo kusukela 1700. amathikithi Day kukhona nje € 20 zihlanganisa ukungena Palace, Izingadi, nokunye okuningi. Kungcono kakhulu, izitimela ukusebenzisa kusukela enkabeni yedolobha ngqo Palace, elenza bekufika lapho kushelele. Lokhu interconnectedness ngokusemthethweni kwenza Paris omunye izihloko zethu engcono European ekusukeni isitimela.
2. London, E-UK
Omunye siqu sami amadolobha ayizintandokazi kanye nje amahora amabili kusukela Paris amanga inhloko-dolobha United Kingdom: London. Lokhu inengxubevange yamasiko iyikhaya ephezulu kubantu abayisishiyagalolunye million zonke angafani. Kusukela Posh Chelsea ukuba Soho eligabavulayo, uzothola imisebenzi yawo wonke umuntu ephathini lakho. Catch omunye musicals zakamuva ngaphambi elibangise phezu Globe kaShakespeare futhi uqede ubusuku yakho ngesikhathi Shard, umbhoshongo kunazo zonke e-London.
Ngeke ufuna ugijimele kuleli dolobha, ngakho hlelani isikhathi sakho ngendlela efanele. Noma ngabe ushona le Harry Potter studios (ihora ukusuka edolobheni), noma umane ukungenisa izimpawu zendawo ezinkulu njengo-Tower of London, ISt. SikaPawulu Cathedral, Westminster Abbey, uBig Ben, noma i-London Eye, njalo ngeminithi wachitha eLondon yithuba ukuze ufunde kabanzi mayelana ezweni lakhe Empire kanye wawufinyelela emhlabeni wonke.
Isitimela esinejubane kakhulu i-Eurostar sikuthatha usuka eParis uye esikhungweni saseLondon emahoreni nje amabili, okuyinto izindlela uzoba ukuchitha kancane isikhathi wokujikeleza isikhathi esiningi adventuring. Ngakho, sibheka iLondon njengenye yezinhloko-dolobha zaseYurophu ezihamba phambili ngesitimela.
3. Kuhle-European Osonhlamvukazi ngihambe ngesitimela: Amsterdam, I-Netherlands
Famous for imisele yayo kanye labantu ibhayisikili ancike, Amsterdam kukhanya njengoba inhloko-dolobha Netherland sika. With a design esiyingqayizivele, Amsterdam lingumuzi ngokupheleleyo ebukekayo futhi standout phakathi izihloko European. Izitimela kusukela Paris amahora amathathu awubeke nawe nganoma Amsterdam Centraal, isenkabeni yedolobha.
Head kuya Museumplein angangenisa Van Gogh Museum ngaphambi ababeya zeNdlu Bols Cocktail & Genever Experience, okuhlanganisa owukhethayo cocktail egumbini layo yokunambitha.
Ungakhohlwa cruise imiselekazi, noma. Kungakhathaliseki ukuthi uthathe uhambo ozinikele noma hop ungene omunye izikebhe zomphakathi leli dolobha, uzothola umbono omusha ngokuphelele emanzini. Naphezu propensity yayo for izikebhe kanye emabhayisikili, Amsterdam kalula esuka kulo lonke elaseYurophu nge high-speed komzila, okwenza lokhu Olwa omunye phezulu ngoba engcono dolobha European ukuhamba ngesitimela.
A ibufakazi ukukhalipha German, emzini Berlin kuyinto nesifundo esimnandi yobumbano. Kabili nge Berlin Wall, le nhloko-dolobha kuphela ngasibuyisela ubunye baso e 1989 kulandela ukuwa kombuso wamaKhomanisi empumalanga. Kusuka lapho, laqhuma ne ukukhula zasemadolobheni futhi manje inabantu abangaphezu kwezigidi ezimbili. Kuyinto egcwele izikebhe ubhiya Amabha, iminyuziyamu, nezinsalela ezihlaba graffitied we-Wall.
Njengoba isikhungo samasiko wezwe, Berlin uyisidingo ukuvakashelwa. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuzijabulisa zazishiswe ngesimo opera noma efuna hit ezinye haunts hippest eYurophu, Berlin is hhayi ukuba ezingabanjwanga.
Nakuba ngizobe kukuthatha amahora okungenani eziyisithupha ukuze ufike lapha kusukela Amsterdam, kukhona izitimela eziningi ngosuku, okuyinto izindlela ungasetha ohlelweni lwakho ukufika.
5. Kuhle-European Osonhlamvukazi ngihambe ngesitimela: ePrague, I-Czech Republic
Eyehlukile capitals Western Europe, EPrague iyinhloko-dolobha ye-Czech Republic eMpumalanga Yurophu elinye lamadolobha iningi abadumile-Central European. Ikhaya ukuze wemitapo kakhulu labadvumile emhlabeni, the Klementium, EPrague ibonisa isiko laso emhlabeni wonke amagumbi. Vakashela Wewashi Lomkhathi, omdala yokusebenza iwashi emhlabeni. Thatha ukuzulazula uzungeze Isikwele Esidala, lapho cobblestone ezitaladini nezindawo zokuhamba okungelula ukuba pedestrianized kusho ungachitha amahora ezulazulayo ngaphandle kokukhathazeka.
Top off isikhathi sakho nge isiphuzo esisodwa imigoqo leli dolobha eziningi emiphongolweni ngaphambi elibangise aphume a music festival.
EPrague uqhosha kakhulu isitimela izixhumanisi namanye amadolobha, kuhlanganise nesikhathi uhambo kusukela Berlin ka ngamahora amane nesigamu. Yima lapha ukuncela ngomlando walo muzi ngaphambi kokuqhubeka uhambo lwakho kulo lonke elaseYurophu.
IYurophu indawo enkulu futhi ehlukahlukene i-Union yayo esho ukuthi kulula kunakuqala ukuhamba ngesitimela. Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo amazwe borderless nohambo kulezi dolobha mlando ngesikhathi sakho. Yeqa ikhanda kwesikhumulo sezindiza izixuku zalo futhi overpriced indiza ukudla bese usebenzisa Isitimela travel. Kungakhathaliseki ukuthi hop ibhodi umzila zesifunda noma ukuchitha okuncane ukuze wesitimela high-speed, ozozijabulela uhambo wesitimela, ukubona indawo, nokuningi okuningi.
Siye waba embozwe amathiphu ethu travel. Manje isikhathi sika ukubhuka ezinye ezitimela! Londoloza Isitimela yindawo yokuthenga amathikithi esitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Kuhle-European Osonhlamvukazi ngihambe ngesitimela” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-capitals-travel-train%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
inhlokodolobha	izihloko	i-europeantravel	europetrains	i-eurotrip	London	Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi	travelfrance	travelgermany	travelnetherlands
Phezulu 3 Kuhle zemininingwane Imizila Ukuze Winter EYurophu
Phezulu 10 Izindawo Eziyimfihlo Emhlabeni
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba Germany, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Poland, Qeqesha Ukuhamba eScotland, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe